भगवान रामको पालामा प्रयोग भएको विमान भेटीयो ! - Tanahu Post
भगवान रामको पालामा प्रयोग भएको विमान भेटीयो !
भगवान रामको पालामा समेत विमान प्रयोग भएको थियो । जुन कुरा सबैलाई थाहा छ तर कसैले विश्वास गर्न मान्दैनन् । अहिले महाभारतकालको विमान अफगानिस्तानमा भेटीयो । एक गुफा भित्र यो विमान भएको दावी गरिएको छ । यो विमानलाई लिएर संसारभर चासो व्यक्त गरिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार ५ हजार बर्ष पुरानो विमान अफगानिस्तानको पहाडमा भासिएको अवस्थामा भेटीएको छ । यो विमानलाई विषेश किसिमले सुरक्षीत राखिएको थियो । जसका कारण यसको नजिक कोही जान पाइरहेको छैन । अमेरिकी आर्मी जब गुफाको भित्र गए तब विमानको आवजका कारण बाहिर आउन पाएनन् ।
यो आवजलाई टाइम वेल भनिन्छ । यो टाइम वेल विमानलाई सुरक्षीत राख्ने शील्ड हो । यो विमानका बारेमा सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले बोलेका थिए । यो विमानका बारेमा रामयण र महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो विमान आगो ओकल्ने मिसाइलले बनाइएको थियो । यसका साथै यसमा केही खतरनाक हतियार भएको बताइएको छ । विमानको डायमिटर करिब ५.५ मिटरको थियो । यसले सहि निशाना लगाएर हमला गर्ने गरेको बताइएको छ । एजेन्सी Simpal News TV बाट
Prevशुटिंग स्थलमै पल र पूजालाई लगाइयो हतकडी किन होला ??
Next१३ मा बिहे, १५ मा आमा, १८ मा जागिर र २१ मा एकल : एक प्रहरी महिलाको जीवनगाथा !